Shiinaha 8 Xariiq-alxanka Xirfad-Shaqaynta oo leh laba Soo saare Boos iyo Soo-saare | Yunhua
Sidee loo kordhiyaa waxtarka robotka shaqeeya? Ku dar hal miis shaqo oo dheeraad ah waxay noqon doontaa hab wax ku ool ah. Shaqaaluhu wuxuu miiska shaqada ku qaadanayaa hal miis oo shaqo ah halka aaladda robotku ay kaalaadi doonto miiska kale ee shaqada si ay robotku si isdaba joog ah ugu dhejiso sheyga shaqada.
Halbeegga alaabta & faahfaahinta
Xarunteena 8 alxanka robotka alxanka oo leh labo booswaare waa mid kamid ah istaandarka shaqada. Dhidibka dheeriga ah ee dibedda wuxuu la shaqeyn karaa robot si robotku u dhammeeyo codsi dhib badan. Labadan meeleeye ayaa sidoo kale loogu yeeri karaa miiska shaqada waxaana lagu xakameyn karaa sanduuqa kontoroolka fog. Marka shaqaaluhu dhammeeyo shaqada hagaajinta oo riix sanduuqa kontoroolka fog. Robot wuxuu aadi doonaa alxanka miiska alxanka ka dib markuu dhammeeyo kii hore. Waxaan ku xirmi karnaa istaatiijka nadiifka ah ee Tooshka kaasoo waxtar u leh qiiqa birta.
Shirkadda YOO HEART waxay macaamiisha u soo bandhigi kartaa shuruudo kala geddisan oo gaarsiinta ah. Macaamiisha ayaa dooran kara habka rarka ee badda ama hawada iyadoo la raacayo mudnaanta degdegga ah. Kiisaska baakada robot YOO HEART waxay buuxin kartaa shuruudaha xamuulka badda iyo hawada. Waxaan diyaarin doonaa dhammaan faylasha sida PL, shahaadada asalka, qaansheegta iyo faylasha kale. Waxaa jira shaqaale shaqadiisa ugu weyni tahay hubinta in aalado kasta oo ka mid ah macaamiisha dekedda la geyn karo iyadoon wax dhib ah la helin 20 maalmood oo shaqo.
Macaamiil walba waa inuu ogaadaa robot YOO HEART wanaagsan kahor intaysan iibsan. Mar alla markii ay macaamiishu yeeshaan hal rooti oo YOO HEART ah, shaqaaluhu wuxuu 3-5 maalmood tababar bilaash ah ku heli doonaa warshadda YOO HEART. Waxaa jiri doona koox wechat ama whatsapp group ah, farsamayaqaanadeena masuulka ka ah adeega iibka kadib, korontada, qalabka korontada, sofweerka, iwm.
Q1. Waa maxay farqiga u dhexeeya booska ay xukumaan plc iyo nidaamka xakamaynta.
A. Dhibaatada ugu weyni waxay tahay haddii booska ay maamusho PLC, waxay ka gudbi kartaa oo kaliya booska illaa booska kale, robotku ma la shaqeyn karo booska (isukeenista). intaad isticmaaleyso nidaamka xakamaynta, waxay lashaqeyn kartaa booska. Dabcan, waxay leeyihiin dhibaatooyin tiknoolajiyadeed oo kala duwan.
Q2. Sidee la iskugu xiraa miiska is-hagaajinta?
A. Hadda, waxaan haysannaa 22input iyo 22 wax soo saar. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad siiso calaamado waalka electromagnetic.
Q3aad. Miyaad ku leedahay toosh shucaac saldhiggaaga shaqada?
A. Waxaan ku leenahay toosh nadiif ah saldhigga shaqada. Waa shey ikhtiyaari ah.
Q4. Sidee loogu xidhayaa toosh nadiif ah iyo sida loo isticmaalo?
A. Waxaad heli doontaa buugaag tooska looga shito shucaaca. Adiguna waxaad ubaahantahay inaad bixiso calaamado si aad uhesho saldhiga nadiifka ah wayna shaqeyn doontaa.
Q5. Calaamadee noocee ah ayuu toosh ubaahanyahay saldhiga nadiifka ah?
A. Waxaa jira uguyaraan 4 siginaal shuclada saldhigga nadiifka ah ayaa loobaahanyahay: goynta calaamadaha siligga, calaamadda saliida lagu buufiyo, calaamada nadiifinta, iyo calaamadaha booska.
Hore: Robot alxanka Laser
Xiga: 7 Qalabka Shaqada Qalabka Alxanka